Hydrocarbons: adoo iibsanaya Anadarko, Chevron oo cagajooga Algeria - JeuneAfrique.com - TELES RELAY
ACCUEIL » DHAQAALAHA »Hydrocarbons: adoo iibsanaya Anadarko, Chevron oo cagajoogay Algeria - JeuneAfrique.com
Shirkadda Shirkadda Shidaalka ee Maraykanka, Chevron, ayaa ku dhawaaqday iibsigii ay la leedahay ninka ay isku wadanka yihiin ee Anadarko, taas oo xoojisay joogitaankeeda qaarada Afrika, gaar ahaan Algeria iyo Mozambique.
Chevron, waa shirkad saliideed oo Mareykan ah, wuxuu cagaha koowaad ka dhigayaa Algeria waxaana uu xoojinayaa joogitaankeeda Afrika. Saliidda weyn ee lagu soo bandhigay jimcaha 12 April si ay u iibsato asxaabtiisi Hisarkaro ee 33 bilyan doolar (29 bilyan euros). Dambe waa mid ka mid ah wada-hawlgalayaasha ugu weyn ee Sonatrach ee Algeria, halkaasoo ay ka hawl ka blocks 404 iyo 208 on the beerta Hassi Berkine heshiis dhacayo in 2023, iyo mid ka mid ah deposit ugu weyn ee qaranka, El Merk in Illizi.
Xawaaladaha 260 000 ayaa maalin walba laga soo saaraa Algeria
Isla mar ahaantaa, Chevron wuxuu gacan ka geysan doonaa mid ka mida mashruucyada gaaska dabiiciga ah ee ugu badan Africa, bari ee Mozambique, halkaas oo ay ku tartami doonto shirkad saliideed oo caalami ah oo caalami ah, iyada oo u tartameysa Kumbuyuutarka Exxon.
Last March, markii 12ème Algerian-American shir tamarta in lagu qabtay Houston (Texas), Anadarko uu ku wargeliyay madaxda Sonatrach, ay jecel yihiin in la cusboonaysiiyo dhammaan heshiisyada hawlgalka ay Algeria , ama shirkadu waxay soo saartaa khatarta 260 000 ee maalin kasta.
Macaamilkan wuxuu ka mid yahay kuwa ugu weyn ee saliidda laga soo saaro tan iyo 2015 ee iibka 61 bilyan oo doolar oo ka yimid Kooxda BG Group ee Royal Dutch Shell. Waxay isku dayaysaa xilligan Qiimaha saliidda ayaa dib u soo kabanaya kadib dhowr sano oo hoos u dhac ah taas oo keentay in la dhoofo faa'iido iyo maalgashi by saliidaha waaweyn ee adduunka oo dhan.
Guurka Chevron-Anadarko wuxuu ka tarjumayaa caqabada labad ee ugu horreeya si aad ugu maalgashato qaybaha cusub ee qaybta: gobolka Permian Basin, oo ka soo jeeda galbeedka Texas ilaa koonfur bari New Mexico. Meelahan waxay ku taalaa kaydka Mareykanka ee ugu weyn, waxaana ay noqotay meesha ugu badan ee adduunka ka jirta ee ka hor inta aan la daabicin Biyaha Sacuudi Carabiya iyada oo la soo saaro 4,1 million foosto maalintii (mbj).
Chevron, taas oo si xoogan maalgashiga ee goobaha Australian Dedeka Gorgon iyo Wheatstone oo Doorto sidoo kale in ay sharad ku saabsan gaaska dabiiciga ah ayaa noqday mid ka mid ah ilaha ugu caan ah oo heerkoodu sareeyo ee markii dagaalka ka dhanka ah isbedelka cimilada ayaa shidaalka lafo aan la rabin . "Kooxda tamarta ayaa aqoonsanaysa in ay u baahan yihiin in ay maalgashi ku sameeyaan gaaska shaleega iyo tamarta dib loo cusboonaysiin karo," ayuu yiri Jarand Rystad, oo ah aasaaskii shirkadda Rystad Energy ee AFP.
"Isku-dhafka hantida tayo sare leh ee Anadarko iyo xarumaheena ayaa xoojin doona booska hoggaanka ee Permian Basin, wuxuu awood u siinayaa awoodda Gacanka Mexico, waxaannu xoojinayaa ganacsigeena gaasta dabiiciga ah," ayuu yiri. soo dhaweeyay Michael Wirth, oo ah Agaasimaha Chevron, ayaa lagu soo xigtay qoraal.
Waa in lagu daraa qaybinta saliida?
Shirkadda, taas oo ah hanashada ugu weyn ee tan iyo iibka ah ee ChevronTexaco in 2000, Weliba waxaan qaadan doonaa gacanta waddada ah Delaware Basin (Texas) ee hodanka ku ah gaaska Shale oo xoogee ee Gacanka Mexico sahaminta saliida qotoda dheer.
"Chevron wuxuu noqonayaa kii labaad ee ugu wayn ee shidaal-karbeed adduunka ah," ayuu yiri Roy Martin oo ka tirsan Wood Mackenzie, ka hor Royal Royal Shell iyo BP, laakiin wuxuu ka danbeeyaa ExxonMobil. Kooxaha dadweynaha sida Aramco laguma darin.
On Wall Street, tallaabada Chevron badiyay 5,29 119,27% in dollars in 15H00 GMT, halka Anadarko shidmay in 32,35 61,95% in dollars.
Hawlgalku wuxuu bilaabi karaa dhaqdhaqaaq isku-dhafan oo ka jira qaybta saliidda, isaga oo ku doodaya khubarada. ExxonMobil waxaa laga yaabaa inuu ka soo baxo qoryaha wuxuuna dalban karaa Pioneer Resource Natural, Morgan Stanley Bank.
Dib u soo celinta deynta 15 bilyan euro
Chevron wuxuu bixiyaa xisaabyahanka Anadarko 16,25 oo ah mid kasta oo la qabtay iyo shareecada 0,3869 Chevron. Hindisaha noocaas ah wuxuu qiimeeyaa saamiga Anadarko ee 65 dollars, oo ka dhigan qiimaha 39% marka la barbar dhigo qiimaha xiritaanka Khamiista 11 April.
Shirkadda ayaa sidoo kale la wareegaysa miisaaniyadda 15 ee deynta Anadarko, taas oo u dhiganta qiimaha guud ee shirkadda 50. Hawlgalkani waa inuu abuuraa balaayiin dollar ah 2 oo kayd ah, oo ay ka mid yihiin bilyan doollar oo lacag ah, laga bilaabo sannadka ugu horreeya ka dib dhammaystirka. Chevron ayaa sidoo kale qorshaynaysa in kor loo siiyo 1 in 15 billion by hantida 20 iyo 2020 si loo yareeyo ay deynta iyo kool-koolin saamiyada ay dhex faa'iidooyin iyo dib u iibsato saamiga u gaar ah.
Guurka, oo la filayo in la soo gabagabeeyo qeybta labaad ee sanadka, ayaa weli la ansixin doono maamulka tartanka, guddiyada shirkadaha labada shirkadood iyo saamileyda ah ee Anadarko.
Cameroon: Shaqaalaha Camair-Co oo aan lahayn mushaarka illaa February February 2019